Marooko iyo Nigeria oo maanta ku tartamaya fiinaalka Koobka Qaramada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee CHAN -
HomeciyaarahaMarooko iyo Nigeria oo maanta ku tartamaya fiinaalka Koobka Qaramada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee CHAN
Marooko iyo Nigeria oo maanta ku tartamaya fiinaalka Koobka Qaramada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee CHAN
February 4, 2018 F.G ciyaaraha, Wararka 0
Koobka Qaramada kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee CHAN ayaa maanta magaca laga badeli doonaa kaddib markii ay fiinaalka ku kulmaan Marooko oo tartankaasi martigelinaysa iyo xulka Nigeria.
Xulka Nigeria ayaa doonaya inuu noqdo dalkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda galbeedka Afrika oo koobkan ku guulaysta, hasayeeshee waa inay ka adkaadaan kooxda sida wanaagsan u dheesha ee Marooko kuwaas oo weliba haysta taageero aad u badan.
Tababaraha kooxda Marooko Jamal Sellami ayaa sheegay in Achraf Bencharki iyo Jawad El Yamiq ay dheeli karaan kaddib markii ciyaartoydaasi intii uu tartankaasi socday ay iibsadeen kooxo dibadda ah, tartankan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka qeybqaataan ciyaartoyda ka dheesha gudaha qaaradda Afrika.
Sikastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka garabka uga dheela ee Abelilah Hafidi ayaa fiinaalka ka maqnaan doona kaddib markii uu dhaawac soo gaaray.
Nigeria ayaa waxaa iyana ka maqnaan doona saddex ciyaartoy oo uu dhaawac soo gaaray, kuwaas oo kala ah goolhaye Ikechukwu Ezenwa, Sunday Faleye iyo Daniel James, halka ciyaaryahan Ifeanyi Ifeanyi uu ganaax ku maqnaan doono kaddib markii kaarka cas loo taagay ciyaartii nus dhammaadka ay la dheeleen xulka Sudan.
Qaab ciyaareedka labada kooxood ayaa isku mid ah oo mar qura ayey barbaro galeen halka afarta ciyaar ee kalana ay badiyeen, sidoo kalana hal ciyaar ayuu xul walba guul gaaray kaddib markii ciyaarta lagu daray waqtiga dheeriga ah.